सम्झनामा दिवंगत कवि चितवन शिखरवास – Chitwan Post
जन्मेपछि एकदिन सबै मर्नैपर्छ । मृत्यु जीवनको एउटा अपरिहार्य घटना हो । तैपनि मानिसलाई लाग्दछ, हामी सधैँसधैँभरि बाँचिरहन्छौँ । मर्न कोही पनि चाहँदैन, तर मृत्यु एकदिन अनायासै कुनै न कुनै बहानामा सामुन्ने आइपुग्दछ । त्यसैले होला, मृत्युका बारेमा कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालज्यूले यस्तो भन्नुभएको छ–
आयो टप्प टिप्यो लग्यो
मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो ।
इन्द्रै बिन्ती गरुन् झुकेर पदमा
त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो ।।
यो संसारमा भएका कुनै पनि प्राणी अजर र अमर छैनन् । सबै वस्तु नासवान् नै छन् । मानिस जन्मेपछि मर्दछ, तर पनि मानिसको मृत्युलाई यस संसारमा केही मह¤वका साथ हेरिन्छ । उसले बाँचुन्जेल गरेको सत्कर्म, त्याग र समाजप्रति गरेका राम्रा र असल कामहरुका कारण अर्थात् समाज रुपान्तरणमा पु¥याएका केही मह¤वपूर्ण योगदानहरुले गर्दा ऊ सदा चिरस्मरणीय हुन्छ । भौतिक शरीर नरहे पनि सधैँ उसको सम्झना आइरहन्छ । चितवनमा रहेर सानै उमेरदेखि साहित्यको क्षेत्रमा निरन्तर कलम चलाइरहने एक जना हाम्रा पुराना स्रष्टा चितवन शिखरवासको झझल्को मेरो मानसपटलमा बराबर आइरहेको छ । ७८ वर्षको उमेरमा २०७६ साल भाद्र ९ गते सोमबारका दिन कालिका नगरपालिका वडा नं ५, बाँदरमुढे मुख भन्ने ठाउँको केराघारी बीचमा रहेको एउटा घरमा उहाँको निधन भएको थियो । यो दुःखद समाचारले हामी अत्यन्त मर्माहत भएका थियौँ । जीवनको अन्तिम अवस्थामा उहाँ आफ्ना घरपरिवारका सदस्यहरुबाट टाढा हुनुभयो । कवि शिखरवास केही विद्रोही स्वभावका कवि हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ केही निराशावादी पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले २०२५ सालमा निराशाकै भुमरीमा पिल्सिँदै ‘कसको स्वास्नी’ नामको खण्डकाव्य लेखिसक्नुभएको छ । त्योभन्दा पहिले नै २०२३ सालमा सामाजिक रुपान्तरणका केही विद्रोही शब्दहरु ‘मनको रन्को’ कवितासंग्रह पहिलो भाग प्रकाशित गरिसक्नुभएको थियो ।
चितवन शिखरवासको जन्म विसं १९९८ साल वैशाख २४ गते मंगलबारका दिन पिता झरेन्द्रबहादुर ढुंगाना (वासुदेव ढुंगाना) र माता विष्णुकुमारी ढुंगानाको कोखबाट चितवन जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम उपरदाङगढी, शेरवासमा भएको थियो । कवि चितवन शिखरवासको खास नाम हरिबहादुर ढुंगाना हो । उनले आफ्ना सिर्जनाहरुमा चितवन शिखरवासको नामले लेख्न थाले । त्यसैले, उनको साहित्यिक नाम चितवन शिखरवास रहन गएको हो । उनको पुख्र्यौली थलो नुवाकोट हो । पछि गोरखाको विरन्चोक हुँदै पिता–पुर्खाहरु चितवनको शिखरवासमा जागिरको शिलशिलामा आएको बुझिन्छ । उनका पिता झरेन्द्रबहादुर ढुंगाना र ठूलोबुबा सुब्बा होमबहादुर ढुंगाना तत्कालीन चितवन इलाकामा नेपाल सरकारका प्रमुख प्रतिनिधिका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । विसं १९७९ सालअगावै उहाँहरु पिता झरेन्द्रबहादुर ढुंगाना चितौन वन जाँच अड्डामा नायब डिट्ठाको पदमा जागिरे हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेलाका नेपाल सरकारको जागिर वन जाँच अड्डाको सुब्बा, डिट्ठा, खरदारलगायत साना–ठूला कर्मचारीहरुको खुबै ठाँटबाठ र रवाफ थियो ।
यो संसारमा भएका कुनै पनि प्राणी अजर र अमर छैनन् । सबै वस्तु नासवान् नै छन् । मानिस जन्मेपछि मर्दछ, तर पनि मानिसको मृत्युलाई यस संसारमा केही महत्वका साथ हेरिन्छ । उसले बाँचुन्जेल गरेको सत्कर्म, त्याग र समाजप्रति गरेका राम्रा र असल कामहरुका कारण अर्थात् समाज रुपान्तरणमा पु¥याएका केही महत्वपूर्ण योगदानहरुले गर्दा ऊ सदा चिरस्मरणीय हुन्छ । भौतिक शरीर नरहे पनि सधैँ उसको सम्झना आइरहन्छ ।
चितवन शिखरवास सानैदेखि तीक्ष्ण बुद्धिका र चलाख थिए । उनी सानोमा केही हठी, चञ्चले स्वभावका थिए । उनी विचित्र–विचित्रका तर्कहरु गर्दथे । उनका तर्क–वितर्कका कुरा सुनेर ठूला मान्छेहरु पनि छक्क पर्थे र यो कवि पो हुन्छ क्यारे भन्ने गर्दथे ! त्यस बखतमा उपरदाङगढी शिखरवासमा स्कुल, पाठशालाहरु थिएनन् । केटाकेटीहरु पढाउनका लागि शिक्षक खोज्नुपर्दथ्यो । यसै शिलशिलामा आफ्ना दुई छोराहरु जेठो ६ वर्षको र कान्छो ५ वर्षको उमेर पुग्दा झरेन्द्रबहादुरले छोरा पढाउनका लागि २००२ साल पुस २१ गते श्री ६ गुरू पं लीलाकान्त शर्मा मरहट्ठाका नाममा आदरपूर्वक लेखिएको पत्र लीलाकान्त गोपाल स्मृतिग्रन्थमा पाइन्छ । त्यस स्मृतिग्रन्थमा अरु पनि जगतबहादुर, अमरबहादुर, होमबहादुर, प्रेमबहादुर ढुंगाना खत्री क्षत्रीहरुको चर्चा गरेको पाइन्छ । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने गुरू पं लीलाकान्त उहाँहरुको निकै नै आदरणीय व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ । हरेक दुःखकष्टमा साहस, धैर्य दिलाउने कुलगुरूका रुपमा मर्यादित गुरू र उहाँको गुरूवचन ढुंगाना परिवारले शिरोधार्य गर्दारहेछन् । एकपटक केही वर्षअघि नै पं गुरू गुणकान्त शर्मा मरहट्ठाले चितौन उपरदाङगढीमा एउटा पाठशालाको स्थापना गर्नुभएको रहेछ, जो चितौनको पहिलो पाठशाला थियो भन्ने कुराको उल्लेख पनि लीलाकान्त गोपाल स्मृतिग्रन्थमा पाइन्छ ।
विसं २०१३ सालअघिसम्म चितौन र नवलपुर जिल्लाको वन जाँच गैँडा गस्तीको प्रशासनिक कामकारबाही उपरदाङगढी शिखरवासबाटै हुने गर्दथ्यो । उपरदाङगढीमा सैनिक ब्यारेक, तोपखाना, मालअड्डा, हुलाक, अदालत र अन्य कार्यालयहरु थिए भने शिखरवासमा वन जाँच, कौशी खाना, हातहतियार, खरखजाना, चौकी आदि अड्डाहरु थिए । उपरदाङगढी त्यतिबेला एउटा मजबुत सुरक्षा किल्लाको रुपमा मानिन्थ्यो ।
हरिबहादुर ढुंगाना र चितवन शिखरवासको प्रारम्भिक शिक्षा शिखरवासमा नै भयो । सुरूका दिनहरुमा जोगिमारामा साहिँला गुरूबाद्वारा अक्षराम्भ भई नेपाली ठूलो वर्णमालाको पठानपाठन पूरा भयो । त्यसपछि अंग्रेजी पढाउन भनी बिहार, चम्पारणबाट विश्वनाथ कायस्थ नामका मास्टर झिकाइयो । उनी लगभग १ वर्षमात्रै बसेर चितौनको मालपुरमा आई पढाउन थाले । केही समय विश्वबन्धु थापाले आफ्ना निजी सचिव (विश्वबन्धुका असिस्टेन्ट) पुष्पराज सुवेदीलाई शिखरवासमा पढाउन भनी पठाइदिए । त्यतिबेला होमबहादुर सुब्बाका छोराहरु भीष्मप्रताप, प्रेमबहादुर, मनबहादुर र मुरारीप्रताप पनि पढ्दथे । प्रेमबहादुरका छोरा किशोरचन्द्र ढुंगानालगायत झरेन्द्रबहादुरका छोरा विष्णुबहादुर, हरिबहादुर पनि त्यहीँ सँगै पढ्दथे । जगतबहादुरका छोरा नेत्रबहादुर अल्लि ठूलै भइसकेकाले उनी गैँडा गस्तीमा जागिरे थिए ।
चितवन शिखरवास सानैदेखि तीक्ष्ण बुद्धिका र चलाख थिए । उनी सानोमा केही हठी, चञ्चले स्वभावका थिए । उनी विचित्र–विचित्रका तर्कहरु गर्दथे । उनका तर्क–वितर्कका कुरा सुनेर ठूला मान्छेहरु पनि छक्क पर्थे र यो कवि पो हुन्छ क्यारे भन्ने गर्दथे !
विसं २००९ सालमा नायब डिठ्ठा झरेन्द्रबहादुर ढुंगाना पटनामा उपचार गराई फर्कने क्रममा चितौन ठोरीको अमबास चौकीमा बास प¥यो । त्यहीँ उनको निधन भयो । त्यसपछि उनका दुई छोरा र दुई छोरीको सम्पूर्ण लालनपालन गर्ने जिम्मा उनकी धर्मपत्नी विष्णुकुमारी ढुंगानाको थाप्लोमा आइप¥यो । विरह र वेदनाका साथमा आफ्नी आमा दुर्गाकुमारी भण्डारीलगायत सबैको आशाकी एकमात्र केन्द्रबिन्दु विष्णुकुमारी नै हुनुहुन्थ्यो । कठारका जिमिन्दार गोरीराम महतो झरेन्द्रबहादुरका सच्चा हितमित हुनुहुन्थ्यो । उहाँले चितौन घोक्रेहरा झर्दाका केही समय हलबल, रासनपानीको मद्दत सघौनी गरी खेतबारी आबाद गर्नुभयो ।
पिताको निधनपछि हरिबहादुरले पढ्नमा त्यति ध्यान दिएनन् । आमाको हर प्रयास विफल भयो । उनले धेरै पढ्न सकेनन् । हरिबहादुर ढुंगाना आन्तरिक भावनामा डुब्न थाले । उनी भावुक हुँदै गए । उपरदाङगढी शेरवासको सेरोफेरो, वनजंगल, प्राकृतिक सुन्दरता, हरियाली, पाखापखेरा, कोलारको चेपाङ गाउँ, बाघखोर, काउले, उच्च शिखर, रमणीय गुरूङ गाउँ आदि प्राकृतिक परिवेशले बाल्यकालबाट नै लहडीमा लहरिँदै बहकिँदै कवित्वको प्रेरणा जागृत हुँदै गयो । सानै उमेरमा कविता, गीत गाउँदै घुम्न थाले । पहिलो कवितासंग्रह ‘मनको रन्को’ पुस्तक लेखेपछि उनले आफ्नो साहित्यिक नाम चितवन शिखरवास राखेका हुन् ।
धेरै वर्षपछि हरिबहादुरले पुनः पढ्न इच्छा गरेकाले आमाले उनलाई काठमाडौँमा पढ्न पठाउनुभयो । दरबार हाईस्कुलको त्रिभुवन प्रौढ शिक्षा निकेतनमा कक्षा ६ मा भर्ना भई पढ्न थाले । केही समयपछि सो स्कुल छोडी लैनचौरको शान्ति विद्यागृह हाईस्कुलमा आठ कक्षामा भर्ना भए । परन्तु, आर्थिक अभावका कारणले पढाइ अगाडि बढाउन सकेनन् । उनी अत्यन्त चञ्चल र खर्चालु स्वभावका थिए ।
काठमाडौँमा विश्वबन्धु थापाले उनलाई दियालो नामको पत्रिकामा काम लगाइदिए । नेपाल पुकार साप्ताहिकमा पनि काम गर्दथे । विश्वबन्धु थापा नेपाली कांग्रेसका निकै प्रभुत्वशाली व्यक्ति थिए । उनकै साथ लागी एकदिन हरिबहादुर नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको निवासस्थान नागपोखरीमा पनि गएका थिए ।
२०१६ मा हरिबहादुर कलकत्ता पुगे । त्यहाँ उनले केयोराम रेचन कारखानामा काम गरे । जति हन्डर खान्थे उतिउति आफ्ना दुःखका भावहरु कवितामा ओकल्दथे । हिन्दी, बंगाली भाषामा पनि कविता लेख्दथे । पछि बम्बई पुगे । भारतको महानगरी बम्बई सहरमा प्लास्टिक कारखानामा ३ वर्ष काम गरे । बम्बई बस्दा उनलाई हिन्दी भाषाका अलावा मराठी, गुजराती, उर्दू भाषामा पनि बोल्नुपर्दथ्यो । ८/१० वर्षपछि नेपाल फर्के । फेरि काठमाडौँ गए । त्यहाँ उनले जनकविकेशरी धर्मराज थापासँग सम्बन्ध बढाए । काठमाडौँमा धर्मराज थापाको साथले रेडियो नेपालबाट उनका गीत गुन्जन थाले– ‘नरोऊ हाम्री प्यारी हिमाल नेपाल आमा ।’ काठमाडौँमा रहँदा पशुपति छापाखानाका सञ्चालक बालमुकुन्ददेव पाण्डे र उनका दाजु पशुपतिदेव पाण्डेसँग उनको विशेष मित्रता थियो । त्यसैले पनि उनलाई साहित्यतिरको झुकावमा झन् बल मिल्यो । उनका प्रकाशित पुस्तकहरु यी हुन् :
१) मनको रन्को (पहिलो भाग)
२) कसको स्वास्नी
४) बुद्धिको कमजोरी
६) मनको रन्को
७) एकोहोरो माया
८) नेपाल आमाको शुभेच्छा
९) तु हमारी तलास लिए
चितवन शिखरवासले प्राप्त गरेका राष्ट्रिय पदक तथा पुरस्कारहरु :
१) विसं २०२५ सालमा जिल्लाव्यापी कवि सम्मेलन हुँदा ‘मुटुको व्यथा’ शीर्षकको कविता सर्वप्रथम भएकोले मूर्धन्य लेखक तथा वरिष्ठ साहित्यकार आनन्ददेव भट्टबाट स्वर्णपदक प्राप्त ।
२) विसं २०६९ साल असोज ११ गते कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्याल, नाट्य सम्राट् बालकृष्ण सम, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको स्मृतिमा स्थापित त्रिमूर्ति निकेतनद्वारा आठौँ त्रिमूर्ति दिवसमा नगद राशिसहित ताम्रपत्रबाट सम्मानित ।
३) विसं २०७१ साल असार १३ गते आदिकवि भानुभक्त आचार्यको द्विशतवार्षिकीको उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय सम्मान कार्यक्रममा नगद राशिसहित भानुभक्त पुरस्कार र ताम्रपत्रबाट सम्मानित ।
४) विसं २०७३ साल भदौ ९ गते श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिन कलानाथ अधिकारी प्रतिष्ठान नेपालद्वारा चितवन साहित्य परिषद्को सभाहलमा आयोजित समारोहमा सम्मानपत्रबाट सम्मानित ।
५) सन् २००३ मा भारतीय राजदूतावास काठमाडौँबाट ‘हिन्दी मेँ अच्छे लेखन के लिए’ नगद राशि सहित प्रमाणपत्रबाट विभूषित ।
अन्तमा, यस्ता महान् साहित्यसेवी चितवन शिखरवास अब हामीबीच हुनुहुन्न । उहाँ यही भाद्र ९ गते सोमबारका दिन यस धरतीबाट सदासदाका लागि जानुभयो । अब उहाँका उत्तम कामहरु मात्र हाम्रो स्मृतिमा सधैँ रहिरहनेछन् ।
आज भाद्र २१ गते शनिबारका दिन १३औँ दिनको पुण्यतिथिमा उहाँको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै यिनै शब्द–सुमनका साथ उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु !